Izindlela Eziyisithupha Ongayihlaziya Ukusebenza kwe-SEO yakho futhi usebenzise lolo Lwazi ukukala phezulu kuGoogle
Ngemiphumela yokuqala emihlanu ebonakalayo ecela cishe amaphesenti angama-70 wokuchofoza kwe-Google. Kuyadingeka ukuba nokuqonda okuphelele kwe-SEO analytics. Ngenkathi ukusebenzisa amathuluzi kaSemalt kuzokusiza ukuthi ufike lapho, kubalulekile ukwazi ukuthi yini oyibukayo nokuthi ikusiza kanjani.
Ngezansi, kuzobe kudlule izinto eziyisithupha ongazisebenzisa ekuqondeni kwakho i-SEO. Ngokuqonda isihloko, ungacindezela iwebhusayithi yakho kuze kufike lapho ukufuna kwayo kungazisiza khona. Akusilo uhlu oluhlanganisa konke, kepha kuzokunikeza ukuqonda okuqinile kokuthi ungaqala kanjani.
Hlola izihloko zakho.
Shintsha izincazelo zakho ze-meta.
Bheka okuqukethwe kwabancintisana bakho.
Bheka amagama asemqoka owasebenzisayo.
Sebenzisa ukuhlaziywa kwewebhusayithi yamaSemalt kwamahhala.
Tshala imali ngomkhankaso we-SEO.
Hlola izihloko zakho
Kusukela ezinsukwini zokuqala zokukhiqizwa kokuqukethwe, izihloko zezindaba zihlala zigcina izinga eliphakeme. Usebenzisa izihloko zakho ze- H2 ne- H3 ngokufanelekile kunikeza ifomethi efundeka ngokwemvelo. Fafaza ezindaweni ezifanele ukuqinisekisa ukufundeka. Le nqubo izokhuthaza abafundi ukuthi bahlale, okwenza izinga lewebhusayithi liphezulu ezinjini zokucinga.
Le ndlela iyodwa ngeke ibe nomthelela oqondile ku-SEO yakho. Kepha uma sihlanganisa lokhu ngamagama angukhiye afanele, abafundi bazokwazi ukukuthola futhi banamathele. Kungenzeka uqhubeke nokubheka iwebhusayithi uma kulula ukuyifunda.
Lapho ulungisa izihloko zakho, zama ukucabanga ngeposi lakho lebhulogi njengebhuku. I-H1 idinga ukuba yisihloko sakho, futhi kufanele yazise abafundi ukuthi yini abayifunayo. Ngesihlokwana, ngineziphakamiso ezimbili.
Inketho yokuqala ukwengeza isihlokwana sakho njengesitatimende senzuzo esibekwe ekugcineni kwesihloko sakho. Inketho yesibili ukuhlinzeka ngesingeniso esilandelwa yisihlokwana esinencazelo eningiliziwe yesihloko. Inketho yesibili yenza umfundi afinyelele emcabangweni ngenkathi inketho yokuqala isiya ephuzwini. Ayikho indlela eyodwa yokwenza lokhu, ngakho dlala uzungeze uze uthole okuthile okusebenzayo.
Shintsha Izincazelo Zakho zeMeta
Enye yezingxenye ezingagciniwe kakhulu kuwebhusayithi yakho yincazelo ye-meta. Abantu abaningi abazi ukuthi incazelo ye-meta ekhasini ngalinye. Ngokuthola lokhu, unethuba eliphakeme lekhasi elilodwa noma simo se-athikili.
Leli khasi lizoholela abantu kwezinye izingxenye zewebhusayithi yakho, lapho abangasebenzisa khona usizo lwakho ngezinsizakalo zakho. Ku-google, incazelo ye-meta ingaphansi kwekhasi le-search link elixhumanisa ikhasi. Bheka ngezansi ukuthola isithombe.
Ngokombono we-SEO, ukubeka amagama asemqoka efanelekile encazelweni ye-meta kuyindlela enhle kakhulu yokubeka izinjini zokusesha. Noma ngabe amagama akule ncazelo angayisizi i-SEO yakho, kuzonikeza umfundi umbono wokuthi yini okufanele ayilindele ngaphambi kokuyichofoza. Ukungabi nencazelo ye-meta yithuba lokuchitha.
Lapho wenza izincazelo zakho ze-meta, zama ukugcina izinto zimfishane futhi ziqonde. Iba nekholi esenzweni (i-CTA) etshela abantu ukuthi benzeni ngaphakathi kwale ncazelo. Indlela ejwayelekile ukuyigcina ingaphansi kwezinhlamvu eziyi-150.
Bheka okuqukethwe komncintiswano wakho
Cabanga ngamagama agqamile, okuqukethwe, kanye nefomethi lapho ubheka okuqukethwe kwawo. Umqondo hhayi ukuntshontsha ifomu labo. Inhloso yakho idinga ukuthuthuka kokuqukethwe kwabo.
Isibonelo, uma ungumenzeli wentengiso odala okuqukethwe kwenkampani yezicathulwana ezincane, uzofuna ukubheka okwenziwa ngabantu abasesimweni sakho. Ungafuna ukudala okuqukethwe okuheha izithameli zakho eziqondisiwe. Isibonelo, iZappos ihlose abantu abasha abagcizelela isitayela nekhwalithi.
Uma inkampani yakho yezicathulo ifuna ukuncintisana, umgomo wokugcina kuzoba ukuthola inkampani efana neZappos. Kodwa-ke, lapho uqala, kufanele uthole ezinye izinkampani ezenza into efanayo neyakho futhi ukhiqize okuqukethwe okuthuthuka kulokho osekuvele kuqhubekile. Isibonelo, uma izicathulo ezihlukile kakhulu zibuyele emuva ngesitayela, uzofuna ukuqondisa igama eliyisihluthulelo se "izicathulo eziphakeme eziphakeme".
Ungabhala izindatshana eziningi ezisemngceleni wesihloko ezibandakanya imiyalo yokuthi zingahlanzwa kanjani kahle, amabhulukwe ahamba nawo, amashini ahamba nawo nokuthi ungazenza kanjani ukuba zihlale phakade. Uma nobabili nenza okuthunyelwe, uhlu lwenu kuzoba ukwenza ukwenza izihloko nokuqukethwe okuphumelela kunokwazo. Uma ubheka ubungako, izidingo zabo ezintathu zilingana nesithupha sakho.
Bheka amagama angukhiye owasebenzisayo
Lesi sihloko siyinto yokwanda kokuthunyelwe kwethu kwangaphambili, kepha amagama angokhiye angalungile kusihloko sakho nokuqukethwe kungaheha isixuku esingalungile. Usebenzisa isibonelo ngaphambili, uma ukhiqiza amabhlogi agxila ezicathulweni, awufuni umuntu ofuna amahembe. Ukuthambekela kwegama elingukhiye elithi “polyester ethambile” ngeke kusize inkampani yakho yezicathulo kakhulu.
Futhi, amagama abalulekile owasebenzisayo angancintisana kakhulu. Ezinkampanini ezincane, zingadinga ukuqondisa amagama angukhiye anomthelela omncane. Akusizi ukuzama nokubiza “izicathulo ezintsha” lapho ezinye izinkampani eziyizinkulungwane ezingama-300 zifuna ukwenza into efanayo. Izinkampani eziningi ezingezansi zaziwa kakhulu, zithembeke ngemikhiqizo.
Umkhuba omubi engivame ukuwabona kulezi zinsuku "ukugqokwa kwamagama angukhiye." Ukufakwa kwegama elingukhiye kuzama ukukhohlisa amagama amaningi aseshwayo kubhulogi ukulenza lifinyelele kunjini yakwaGoogle. Inkinga ngale isu ukuthi i-AI yakwaGoogle iyayibona le nkinga. Labo abazama ukugcwaliswa kwegama elingukhiye cishe ngeke babeke phezulu.
Ukuthola umqondo omuhle ojwayelekile wokuthi amagama angukhiye asebenza kanjani, ungavele usebenzise i-google. Ngokufuna ithemu ocabanga ukuthi lingaletha abantu kuwebhusayithi yakho, ungathola ukuthi yiliphi elinye iqoqo lewebhusayithi lelo gama. Uma lawo mawebhusayithi enziwa ku-niche yakho, khona-ke unegama elingukhiye elifanele. Ngokwengeza izinto kulelo gama elingukhiye, unganciphisa isihloko.
Sebenzisa i-Semalt Analyzer yeWebhusayithi yamaSemalt
Amawebhusayithi, ekuthuthukisweni kokuqala, ngokwemvelo anezinkinga ezahlukahlukene ezimbalwa. Bangaba nokuxhumeka okuphulwe, ukuqondisa kabusha okuningi, ukusebenza kahle, futhi bephuze ukulayisha. I-Semalt's Website yeWebhusayithi ihlaziya ukubona lezi zinkinga.
Ithuluzi leWebhusayithi Analytics likunikeza amathuluzi adingekayo ukuhlanganisa ukukhathazeka okuningi esike sikhulume ngakho ngaphambili, kepha konke kukuphakheji elilodwa. Kulesi sici, akudingeki ukuthi ukhokhe ukuthola umbono wokuthi iwebhusayithi yakho ime kuphi. Kodwa-ke, labo abangebona ochwepheshe kufanele bacabangele umkhankaso we-SEO.
Ngethuluzi elifanele lokuhlaziya, uzokwazi ukuqonda ukuthi yikuphi ukuchofoza kuwebhusayithi yakho okubangela ukuguqulwa nokuthi yini amagama angukhiye akhulisa ithrafikhi kusayithi lakho. Ngenkathi zombili ziwusizo ngezizathu ezahlukahlukene, uma inhloso yomkhankaso wakho we-SEO ukukhulisa ukuthengisa, awufuni igama elingukhiye eliheha izivakashi. Lo mbono usilethela esihlokweni sethu esilandelayo, ukhetha ukutshala imali emkhankasweni ozokusiza ukhule.
Tshala imali ngomkhankaso we-SEO
Kunezinsiza ezahlukahlukene ezitholakala laphaya ezingakusiza ufunde izisekelo ze-SEO . Kepha amahora amaningi angawathatha ukucwaninga ngesihloko angadonsa kanzima. Kuyiqiniso ikakhulukazi uma unebhizinisi elincane elidinga ukubhekelwa amakhasimende. Awukwazi ukugxila ekwenzeni ukuthengiswa uma usebenzisa leso sikhathi ucwaninga ukuthi iwebhusayithi yakho ingabekwa kanjani.
Ngokuhlanganisa ulwazi lwakho lwesihloko neqembu likaSemalt labachwepheshe, uzokwazi ukubona indlela eqonde empumelelweni. Futhi, lolu lwazi lungakusiza ukuthi ugcine inzuzo oyinikezwe uSemalt. Umsebenzi wethu uza ukuqinisekisa ukuthi amagama asemqoka owakhethayo aphumela kuhlelo olusebenzayo. Vele, imikhankaso yethu iza namagama angukhiye aphakanyisiwe.
Ungakhetha phakathi kwemikhankaso eminingi ngokuya ngosayizi wewebhusayithi yakho nesabelomali sakho. Qiniseka ukuthi ubuyekeza imininingwane ye- AutoSEO ne- FullSEO ukuze uqiniseke ukuthi sihlangabezana nezidingo zakho. Njengoba kunikezwe usayizi kanye nezibalo zewebhusayithi yakho, iqembu lochwepheshe likaSemalt likufanele ukukusiza wenze isinqumo esihle sezezimali.
Ukuqonda ukuthi ungayihlaziya kanjani i-SEO kungakusiza kanjani ukufinyelela Okuphezulu kweGoogle
Ngokuqonda okuqinile kokuhlaziya i-SEO, uzokwazi ukuzinikela ngesandla phezulu ukuklelisa phezulu ku-google. Impela, okuqukethwe okusebenzayo nokufundekayo kubalulekile kulokhu. Izihloko ezifanele ezinamagama angukhiye aqondile azisizi i-SEO yakho kuphela kodwa ziqinisekise ukuthi umfundi angalandela nazo.
Futhi, ukuqonda ukusetshenziswa kwencazelo ye-meta kuzokusiza ekuletheni labo abangahle bangabaze iwebhusayithi yakho. Ngokuhlinzeka nge-CTA encazelweni ye-meta, bazokwazi ukuthi yini okufanele bayilindele kusuka kusihloko sakho. Abafundi baphefumulelwa yilabo abanokuqiniseka okungokwemvelo emazwini abo.
Amagama agqamile afanelekile njengokufundeka uma kukhulunywa nge-SEO. Ngokusebenzisa ithuluzi lokuhlaziya lamaSemalt lamahhala, ungathola umbono omuhle wokuthi ungaqala kuphi. Ngokwandisa lokhu ukufaka umkhankaso we-SEO, ungaguqula lokhu kuqonda kube yimiphumela enokulinganiswa. Ngeminye imininingwane ngalawa mathuluzi, dala i-akhawunti namuhla.